Gift Box - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Green Colour Chipo Bhokisi Packaging Magnetic Pedyo
Bhuku-Rakaputirwa Goridhe Ruvara rweChipo Bhokisi neMagnetic Kuvhara Chipo Bhokisi Packaging, bhokisi rekutakura zvipo, rakareruka asi rakanaka.
Kadhibhodi Dhivha Bhokisi ne Foam yeRin
Kadhibhodi Dhivha Bhokisi ne Foam yeRin Kadhibhodhi Dhivha Bhokisi, yakanaka giredhi dhiza bhokisi rekushongedza zvishongo. Dhiza Bhokisi reRin, saizi diki yekurongedza mhete, inotaridzika uye inotapira. Dhizaina Bhokisi Rerimwe, fani dhizaina yakakwirira yekudhinda mhando, fungidzira ichaita kuti vatengi vako vanzwe...
Kupukuta dema Chipo Bhokisi neUV Logo
Kupukuta dema Chipo Bhokisi neUV Logo Dema Chipo Bhokisi, rakasvibirira dema rine banga UV rinopedzisa, vane rakasarudzika. Folding Chipo Bhokisi, bhokisi rinopetwa, riri nyore kutumirwa uye kutaridzika zvakanaka. Bhokisi Rokurongedza Bhokisi, kuputira Chipo chiitiko chakadhinda dhizaini, inotaridzika chaizvo.
Tsika Scarf Packaging Bhokisi neGoridhe Logo
Tsika Scarf Packaging Bhokisi neGoridhe Logo Tsika Scarf Bhokisi, sechipfuva zvipo zvekuisa bhokisi nekupisa kupisa, yepamusoro yepamusoro yekudhinda. Scarf Packaging Bhokisi, bhokisi rehafu yemarara, kadhibhokisi bhokisi rine lid, matte dema rehafu bhokisi. Custom Bhokisi reScff, tsika yakadhindwa uye saizi ine...
Akashongedza Akachena White Chipo Mabhokisi ane Ribbon
Akashongedza Akachena White Chipo Mabhokisi ane Ribbon Ichena Chipo Bhokisi, zvipo zvebhokisi zvigadzirwa kupfekedza, chena bhokisi rine logo rakadhindwa, yepamusoro uye yakanaka mutengo. Chipo Bhokisi neRibbon, ine uta hwembabvu yebhokisi, yakanaka uye inotapira chimiro. Yakanakisa Chipo Bhokisi, kadhibhokisi bhokisi...
Ruvara Rakadhinda Pepa Tube Packaging Round Bhokisi
Ruvara Rakadhinda Pepa Tube Packaging Round Bhokisi Iri bhokisi rezvipo rakagadzirwa mune yakatenderera bhokisi chimiro, rinotaridzika rakasarudzika nemhando yepamusoro yeCMYK kudhinda. Kana zviri zvemukati, tinoshandisa art yepepa yeiyi bhokisi, asi iwe unogona zvakare kusarudza imwe mhando yepepa yekupeta kunge pepa...
Hombe yewaini yepamusoro pepa bhokisi Chipo kurongedza
Yakasarudzika yakasarudzika waini yezvipo bhokisi kuputira Waini bhokisi kurongedza, hwakanaka hwemhando yewaini kurongedza. Waini yezvipo bhokisi, yakakosha dhizaini inofadza vatengi vako. Chipo bhokisi rewaini, zvakare unogona kuishandisa sechipo, shamwari dzako dzichazvida. Tsvaga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro...
Yakaputirwa Matt Folding Bhokisi neMagnetic Flap
Yakaputirwa Matt Folding Bhokisi neMagnetic Flap Yakaputirwa Folding Bhokisi, inopisa inotengesa yekupeta pepa bhokisi nehunhu hwakanaka. Magnetic Folding Bhokisi, bhokisi rine magineti, nyore kuvhura. Folding Pepa Bhokisi, kupeta bhokisi nekuita yakadhindwa kudhinda, kamwe kunze kwemaitiro. Liyang Pepa zvigadzirwa...
Fancy Dhirowa Chipo Bhokisi neUV Logo
Fancy Pepa Dhirowa Chipo Bhokisi neUV Logo Drawer Chipo Bhokisi, dhirowa dhizaini yezvipo kurongedza, yakasarudzika dhizaini ine yakanaka mhando. Dhirowa Bhokisi Dhizaini, tsika yakadhindwa logo uye dhizaini, yakanaka kune chipo. Dhirowa Bhokisi Kuteedzera, chipo kurongedza bhokisi, dhirowa kurongedza bhokisi rehembe...
Glossy Chipo Bhokisi neRibhoni yeRalwearwear
Glossy Chipo Bhokisi neRibhoni yeRalwearwear Chipo Bhokisi neRibbon, kadhibhokisi bhokisi rine ribhoni, yakasvibirira uye yakaisvonaka. Glossy Chipo Bhokisi, kupeta bhokisi ine glossy lamination, inoyevedza uye yakakwirira mhando.Hapana kunze kwechimiro. Chipo Bhokisi rekurara, machira echipfeko bhokisi kurongedza,...
Dhirowa bhokisi Chipo kurongedza neribhoni kubatirira
Yako dhiza dhiza bhokisi chipo kurongedza nembabvu mbambo Yepamberi dhiza dhizaina dhizaina kuti zvive nyore kubvisa, kana iri mbambo, unogona kusarudza ribhoni, machira ekotoni kana Polyester tambo. Uye kudhinda tsika yakaitwa pane yako dhizaini! Liyang Pepa zvigadzirwa co., Ltd ndeye fekitori uye yekutengesa kambani...
Yakakomberedzwa yakapetwa pepa remuchato rwechipo bhokisi
Round Muchato Chipo Pachipo Bhokisi Yakakomberedza denderedzwa bhokisi remuchato wako wechipo zvipo zvinogona kupa izvo vaeni fungidziro yakanaka yemuchato wako, unogona kuita tsika yemuchato wechibhokisi kusanganisira chimiro, ukuru uye kudhinda, mutengo unotaurwa pane wekutanga weruzivo ruzivo. Yakasarudzika zvipo...
Hexagon kadhibhodhi chipo pepa pepa bhokisi
hexagon kadhibhodhi chipo mapepa ekutakura bhokisi Mutsva weChipo chechipo bhokisi rakagadzirwa muhexagon bhokisi dhizaini , rakaomeswa kadhibhokisi bhokisi rine yakakwirira mhando CMYK kudhinda, iwe unogona zvakare kusarudza mamwe mapepa akakosha seParera pepa, mapepa ekushongedza, pepa regoridhe zvichingodaro. Mune...